China Soffit Luminaire Gas Station Light China Manufacturers & Suppliers & Factory
Soffit Luminaire Gas Station Light - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Soffit Luminaire Gas Station Light)
60W Na-enwu n'èzí n'ìhè maka ọdụ ụgbọ oloko
Ugwu elu a nke dị n'elu a na-ekpuchi ọkụ r eplaces 175W HPS / MH, mgbe ọ na-eri naanị 60W nke power.Our N'èzí Canopy Light Fixtures bụ àgwà ihu igwe, ngwangwa nke aluminom na-emepụta oghere polycarbonate maka ndụ ogologo ndụ. Nke a bụ 60w Led Canopy Lights For Petrol Station bụ EC ROHS ETL depụtara na anyị...
100W N'ọdụ ụgbọ mmiri a na-agbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri
Bbier 100w Na- agbanye ya na-enye ìhè bụ UL ETL CE ROHS certificated. Mmiri a na- eduzi 100w nke a na- eji ogo 3030 ibe, akụkọ LM-80 na data IES dị, 120mm / W maka ikpu ọkụ ọkụ gas a. .. Igwe ọkụ mmanụ ụgbọ ala na mkpuchi ntụ ntụ na-enwu gbaa, na-enweghị ụda na corrosion; A na-ewu ebe a na- emepụta ikuku ọkụ ọkụ -na...
Nke a 60W Gas Station Canopy Light Fitit kwụsịrị ụgwọ kọmputa gị ruo na 76%, 200W HPS / HID dochie ya na 60W ìhè mkpuchi maka ọdụ gas . Ụlọ ọrụ gas anyị a na-ahọrọ maka oge 50,000 nke ndụ, Die-cast Aluminum Fin lampshade nye obosara ebe dị mma maka ikpo ọkụ. Mpụpụta lumen nke dị elu 7200Lm site na 120LM / WATT.Our...
ada kpuchie ìhè fixtures 150w 5000k 19500lm
Inye Ike: 1000pcs per week
ada kpuchie ìhè fixtures 150w 5000k 19500lm Ụlọ ọrụ gas anyị na- eme ka ọkụ ọkụ na- eji mma iṅomi 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide mgbochi dị elu ma kesaa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lighting na- eji ọkwọ ụgbọala dị elu, nke na-egosi CE ROHS abd afọ atọ. Anyị Dugara Retrofit kanopi Ìhè eji ọhụrụ duru technology,...
ada ìhè mkpuchi 100w 5000k 13000lm
ada ìhè mkpuchi 100w 5000k 13000lm Ike ìhè 100W na-eduzi anyị na- eji mma iṅomi 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide ihe dị elu ma na-ekesa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lamp na- eji ọkwọ ụgbọ elu dị elu, ya na asambodo CE ROHS abd afọ atọ. Ebe anyị na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enwu eji nkà na ụzụ ọhụụ ọhụrụ, erughị...
Soffit Luminaire Gas Station Light Sensor Gas Station Light Light Led Gas Station Light 150w 100W Gas Station Light Ogwurugwu Gas Station Light Fixture led gas station light Led Linear Suspension Lighting Light 800w High Mast Stadium Light